PROJECT Archive - ဗီရိုတံခါးဆွဲယူ Customize, ကြေးမုံဗီရိုတံခါး, တံခါးဆွဲယူဗီရို, Glass ကိုတံခါးဆွဲယူ, ဗီနိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Panel ကို, ဗီနိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်တံခါးပေါက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်နှင့် wardrobe.More ထက် 10 နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို.
ဆဲလ်ဖုန်း / WeChat / WhatsApp ကို 400-777-0883
Acrylic & Glass မီးဖိုချောင်ဗီရို
အလွှာ & veneer မီးဖိုချောင်ဗီရို
ဗီရို & အိပ်ယာခင်း
နေအိမ် » စီမံကိန်း
အနည်းဆုံးဗီရို & Profile Fittings
မီးဖိုချောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့အံဆွဲ Handel ကို
လျှောတံခါးကို & တံခါး profiles
Swing Glass ဗီရိုတံခါး & လက်ကိုင်
လွှဲဗီရိုတံခါးကို & လက်ကိုင်
ထိပ်တန်းဆွဲထား & တံခါး Profiles
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်တံခါးသည် Model No.CN-K1164 ကိုကိုင်တွယ်သည်
အနည်းဆုံးစနစ်ကလွှဲဗီရိုတံခါးနှင့် profiles မော်ဒယ်：CN-K10641
pensile တံခါးများနှင့်တံခါး profiles မော်ဒယ်：CN- K1191
White က Woodgrain မယ်လမင်းမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မော်ဒယ်：CN- 07201318
PVC ဗီနိုင်းထုပ်မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မော်ဒယ်：CN- 07201816
အဖြူရောင်လွင်ပြင် Vinyl Wrap Panel ကိုမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မော်ဒယ်：CN- 07201716
ပိုလနျ Silver, သီချင်းများနှင့်အတူကြေးမုံကန်းတံခါးပေါက်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ
PVC အမြှေးပါးမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မော်ဒယ်：CN- 06281046
Melamine မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မော်ဒယ်：CN- 06251823
Woodgrain PVC Modular ဗီနိုင်းထုပ်တံခါးပုံစံ：CN-06241101
လင်ကွန်းစီးရီး Hinger တံခါး Wardrobes မော်ဒယ်：CLKPJ264
တိုက်ကပ်နွယ်ပင် & ဧဝကတိုက်ခန်း
Project Name: တိုက်ကပ်နွယ်ပင် & Eve Apartments Project website URL: https://www.ivyevebrisbane.com.au/ supplying time: June 2016 Product and quantity 263 sets wardrobe and sliding wardrobe doors 130 sets ShowerScreen Aluminum profiles
2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Foshan Jamay အလှဆင်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ကမ္ဘာလုံးလူအပေါင်းတို့အားဗီရိုစီမံကိနျး၏အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
.ပြီလ 22, 2020
Custom cabinets ညာဘက်ဘုတ်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ?
Guangzhou Hanyin ကွန်ယက်နည်းပညာကုမ္ပဏီ, Ltd မှ. © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ